Afro Deli oo Magaalada Minneapolis dib looga furay -
Afro Deli oo Magaalada Minneapolis dib looga furay
Ganacsade Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsatada deggen gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa maanta si rasmi ah dib albaabada ugu furay makhaayada Afro Deli.
Makhaayadii Afro Deli ee ku taalay magaalada Minneapolis, gaar ahaan xaafada Cedar ee ay Soomaalidu degen yihiin ayuu ganacsade Kaahin wuxuu u raray goob cusub. Haddaba makhaayada Afro Deli qaybteeda ku taala magaalada Minneapolis ayaa waxaa laga furay Jaamacada Gobolka Minnesota dhexdeeda.
Dad weyne aad u tiro badan oo ay kamid yihiin culumadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota, aqoon yahaniinta, ganacsatada, dhallinyarada, ardayda, siyaasiyiinta, macalimiinta, dhakhaatiirta, carruurta, warbaahinta iyo waliba bulsho weynta Soomaaliyeed ee iyagu deggen labada magaalo ee mataanaha ah ayaa iyagu si qurxoon uga qayb-qaatay daahfurka makhaayada Afro Deli ee maanta dib looga furay magaalada Minneapolis. Ganacsigan Afro Deli ayaa ku kala yaalla magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul.
Kaahin oo isagu u mahadceliyey dhamaan dadkii maanta ka soo qaybqalay daahfurka makhaayadiisa ayaa sheegay in isaga iyo shaqaalihiisuba ay yihiin dad aad u nasiib badan, maadaama ay Jaalliyadiisa Soomaaliyeed ay taageero buuxda ka haystaan isaga iyo ganacsigiisuba.
Haddaba waxaa muhiim ah in la xuso in taageerada buuxda ee uu Ganacsade Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ku muteystay dadaallada iyo taakuleeynta uu mar walba la garab taagan yahay bulshadda Soomaaliyeed.
Makhaayada Afro Deli ee dib looga furay magaalada Minneapolis ayaa si rasmi ah u bilaabaysa adeegyadda ganacsi maalinta berry ah ee ay bisha Febraayo tahay 13-ka, 2017. Waxaad wixii akhbaar ah ee ku saabsan goobta ay makhaayadu ku taalo iyo wakhtiga ay furantahay ka heli kartaa www.afrodeli.com.
Related Items:Featured, local, Somali community, Somali Minneapolis
President Donald Trump’s Muslim travel ban will remain blocked
Soomaali ka Qaxday Mareykanka